HAMRAKHABAR | » महाशिवरात्रिमा कस्तो रहने छ तपाईंंको भाग्य ? महाशिवरात्रिमा कस्तो रहने छ तपाईंंको भाग्य ? – HAMRAKHABAR
काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर २० मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ०९ मिनेट । दिनमान २९ घडी ३२ पला । महाशिवरात्रि व्रत, हलेसी महादेव, पशुपतिनाथ लगायत शिवमन्दिर भयका ठाँउमा मेला, धनिष्टा पञ्चक प्रारम्भ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) पराक्रम बढेर जाने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जागर आउनेछ । सानो प्रयत्‍नले राम्रो काम गरी फाइदा लीन सकिनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरु परास्त हुनेछन् । दाजुभाई तथा छिमेकीहरुसँगको सम्वन्धमा सुधार भएर जानेछ । छोटो तथा रमाईलो यात्रा हुन सक्छ । उत्पादित उद्योगमा लगानी बढाई भने जस्तो रुपैया पैसा कमाउन सकिनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । लेखन कला तथा साहित्य जस्ता क्षेत्रमा झुकाव बढ्नेछ । धर्ममा मन जानेछ भने मन्दिर तिरको यात्राको तय गर्न सकिनेछ ।